सवाल / समाधान – Health Post Nepal
महिनावारी भएको बेलामा ‘सेक्स’ गर्न हुन्छ कि हुँदैन?
सवाल : म ३० बर्षको युवती हुँ। मलाई महिनावारी भएको बेलामा पनि यौन सम्पर्कमा राख्ने चाहना हुन्छ। यस्तो बेलामा यौन सम्पर्क गर्दा समस्या हुन्छ कि हुँदैन? जवाफ : महिलाहरू महिनावारी अर्थात मिन्स भएको बेला (सेक्स) यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ...
नेपालमा कोरोनाको ‘पुनः संक्रमण’को संभावना बलियो छ : डा. शेर बहादुर पुन
विश्वभर कोरोनाभाइरस महामारीका कारण स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरुको संख्या बढ्दो छ। महामारीको अवधि लम्बिँदै गएसँगै पुनः कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिम पनि बढिरहेको छ । नेपालमा पुन संक्रमण हुने सम्भावना कस्तो रहेको छ? कस्ता समस्या लिएर बिरामी आइरहेका छन्? यो प्रश्न...
सवाल म ३२ वर्षको पुरुष हुँ। दुवै पैताला पोल्ने समस्या छ। डाक्टरको सल्लाह अनुसार केहि समय अगाडी थाइराइड, सुगर, बि १२ आदि जाँच गरे। रिर्पोट सबै नर्मल नै थियो। डाक्टरको सल्लाह अनुसार मनोरोगको जाँच गरे। विगत तीन वर्षदेखि एन्टिडिप्रिसेन्ट...
घाँटीको समस्यामा हेलचेक्य्राइँ गर्नुहुन्न
सवाल – मेरो घाँटीमा खाना निल्ने ठाउँमा छाला गएको छ। कहिले पोल्छ। थ्रोटको साइडमा कहिलेकाहीं दुख्छ। केही दिन पहिले मेडिकलमा गएर एलर्जी हाेला भनेर औषधी ल्याएँ। तर, त्यसले निको भएन। दिनमा तीन/चार पटक सुख्खा खोकी पनि लागिरहन्छ। के भएको...
विश्वभरिबाट करिब ५० हजार मानिसहरूले सिएनएनलाई कोरोना भाइरससम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू सोधेका थिए। जसमध्ये केही मुख्य प्रश्नहरूको जवाफ यस अमेरिकी समाचार संस्थाले दिएको छ। सोहीमध्ये हामीले नेपालको परिवेश सुहाउँदो केही प्रश्न तथा जवाफहरूलाई हाम्रा पाठकसामु प्रस्तुत गरेका छौं। कोरोना भाइरस...
गर्भवतीले थायराइडको औषधि सेवन गर्न हुन्छ ?
म २६ वर्षकी भएँ । हाल म गर्भवती छु । मेरो थायराइड लेबल माथि छ । यस्तो अवस्थामा मैले औषधि सेवन गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? दीपिका थापा डा. अलक देवकोटा रजौरिया थायराइड रोग विशेषज्ञ वीर अस्पताल गर्भवती...
म १४ वर्षकी किशोरी हुँ । मेरो महिनावारी अनियमित रूपमा १३–१४ दिनमै भइरहन्छ, जसले गर्दा मानसिक तनाव पनि भइरहेको छ । किन यस्तो भइरहेको होला ? अस्मिता ढकाल डा. जागेश्वर गौतम वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ (निर्देशक, परोपकार...
म पिसाब चुहिने तथा पोल्ने समस्याले ग्रस्त छु । कहिलेकाहीँ थाहा नपाईकनै पिसाब खुस्किसकेको हुन्छ । वेला–वेलमा पिसाब पोलिरहेको हुन्छ । के कारणले यस्तो भएको होला ? रूपक वर्ष २५, सिन्धुपोल्चोक डा. पवनराज चालिसे मिर्गौलारोग विशेषज्ञ पिसाब चुहिने...
मेरो पेट पोल्छ । तीनपटक इन्डोस्कोपी, चारपटक अल्ट्रासाउन्ड गरिसकेँ, केही देखिन्न । के खाँदा र नखाँदा निको होला ? – गणेश पोखरेल पेट पोल्ने एउटा कारण ग्यास्ट्रिक भए पनि अन्य धेरै कारणले पेट पोल्ने गर्छ । अल्ट्रासाउन्ड र इन्डोक्कोपी...
सवाल: ३५ वर्षे महिला हुँ । म नियमितजसो डरलाग्दा सपना देख्छु । मेरा सपना उस्तैखालका हुन्छन् । यसले निद्रामा समेत असर पर्ने गरेको छ । राम्रो निद्रा नपरेजस्तो हुनाले दिनभर फ्रेस पनि हुन्न । यसको कारण र उपचार के...
चिसो मौसम सुरु भएदेखि नै मलाई निरन्तर खोकी लागिरहेको छ । केही दिन अलि कम भएजस्तो हुन्छ, फेरि बल्झिन्छ । घरेलु र अन्य धेरैखाले औषधि खाएँ, परीक्षण पनि गरिरहेको छु, तर पनि खोकी निको भइरहेको छैन, किन होला ?...
म ३१ वर्षको भएँ । हाल जापनमा छु । मेरा दुई छोरी छन् । मेरो उचाइ ५.३ फिट, तौल ६१ केजी छ । मलाई रातको समयमा छिनछिनमा पिसाब लाग्ने समस्या छ । पिसाबथैली पोल्छ, तर, कामको समयमा पोलेको महसुस...
ग्यास्ट्रिकले रिँगटा लाग्दैन, तर तनाव लिएर ग्यास्ट्रिक हुन सक्छ
मेरो उमेर ४० वर्ष, मेरो ब्लड प्रेसर पहिलेदेखि लो थियो, अहिले ठिक छ । हाल ग्यास्ट्रिक पनि छ । अलि बल पर्ने काम गर्दा सामान्यभन्दा बढी पसिना आउँछ, कमजोर महसुस हुन्छ । गर्मीको दिनमा त बेहोस भएर लड्छु जस्तो...
सवाल : म कपाल झर्ने समस्याले पीडित छु । १९ वर्ष भएँ, घरमा विवाह गर्ने कुरा पनि चलिरहेको छ । कपाल झरेकै कारणले मलाई निकै तनाव भइरहेको छ । अझै टाउकोअगाडिको भाग (तालु)मा अझै बढी उखेलेजसरी नै झरिरहेको छ...
कम्प्युटरमा धेरै बस्नेलाई रिँगटा
म ५ फिट १० इन्च अग्लो छु, मेरो तौल ९५ केजी छ । उमेर ३४ वर्ष भएँ, पछिल्ला दिनमा टाउको दुख्छ, रिँगटा लाग्छ र बारम्बार पिसाब फेर्न मन लागिरहने समस्याले पीडित छु । किन यस्तो भएको होला ? सन्तोष...
म पिसाब चुहिने समस्याले पीडित छु । यतिसम्म कि सुतेको समयमा पनि कतिवेला खुस्किन्छ, थाहै पाउँदिनँ । अघिपछि पनि पिसाब ननिख्रिएजस्तो हुन्छ । के कारणले यस्तो हुन्छ ? दीपिका ४२ वर्ष, गौर तपाईंको उमेर र लक्षणका आधारमा तपाईंलाई आङ...